မားသားဘုတ်ပေါ်တွင်ကားမောင်းသူကို INSTALL လုပ်နည်း - မောင်းသူ - 2019
ပို. ပို. , ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ PC များနှင့် laptop မြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ ဤသည်မှာပြီးတော့အဓိကအားဖြင့်စိတ်ဝင်စားဂိမ်းကစားနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးလိုသူအားလုံးတခြားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ acceleration Processor ကို - နည်းလမ်းများတိုး၏အဓိကလက္ခဏာများထဲကတစ်ခု။ နှင့် AMD ၏၏ပိုင်ရှင်များကကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်က၎င်း၏စီးပွားဖြစ် utility ကိုကမ်းလှမ်း processors ။
AMD ၏ Overdrive - သင်က AMD ၏ Processor ကိုမြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းမှခွင့်ပြုမယ့်အခမဲ့ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ program က၎င်း၏ထုတ်လုပ်သူအတော်လေးအရေးကြီးသောမဟုတ်ပါဘူးကတည်းကဤကိစ္စတွင်အတွက်အသုံးပြုသူဆို Motherboard က၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အားလုံးပရိုဆက်ဆာ, Am-2 socket နဲ့စတင်ပြီးလိုချင်သောအာဏာလူစုခွဲနိုင်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာကို: Processor ကို AMD ၏မြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းလုပ်နည်း
AMD ၏ပရိုဆက်ဆာများ၏ပိုင်ရှင်များ (Hudson-D3, 770, 780/785/890, G, 790/990 X ကို, 790/890 ကုမ္ပဏီမှ GX, 790/890/990 FX) ကအရာရှိတဦးက site မှပရိုဂရမ်ကို download လုပ်ပါမှလုံးဝအခမဲ့နိုင်ပါတယ်။ မာကု Motherboard ကအရေးမထားဘူး။ ထို့အပြင်ယင်းအစီအစဉ်ကိုကွန်ပျူတာနိမ့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီးရင်တောင်သုံးနိုင်တယ်။
operating ပြတင်းပေါက် parameters တွေကို, ဒဏ်ငွေ-tuning နှင့်အမှားအတှကျလိုအပျကွောငျး parameters များကိုအသုံးပြုသူ set ကိုတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အတွေ့အကြုံရှိအသုံးပြုသူများကိုသေချာပေါက် program ကိုထောက်ပံ့ပေးသောအချက်အလက်များ၏ကြီးမားသောပမာဏ, မှတ်သားပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့သာဤအစီအစဉ်ကိုကမ်းလှမ်းမှသာအခြေခံ parameters တွေကိုစာရင်းပြုစုချင်:
• Module OS ကိုအသေးစိတ်ထိန်းချုပ်နဲ့ PC setting များကို;
•စစ်ဆင်ရေးအတွက်ကွန်ပျူတာအစိတ်အပိုင်းများကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက် (Processor, ဂရပ်ဖစ်ကဒ်, etc);
• plug-in ကို PC အတှကျစိတျအပိုငျးကိုစမ်းသပ်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ;
•စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုကို PC components များ: ကြိမ်နှုန်းခြေရာခံခြင်း, ဗို့အား, အပူချိန်နှင့်ပန်ကာအမြန်နှုန်း;
•လက်စွဲစာအုပ်အကြိမ်ရေ၏ညှိနှိုင်းမှု, ဗို့အား, ပန်ကာအမြန်နှုန်း, တိုးပွားစေခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်အကြိမ်အရေအတွက်ကို;
• (အန္တရာယ်ကင်းမြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းအဘို့အလိုအပ်) တည်ငြိမ်မှုကိုစမ်းသပ်ခြင်း,
•ကွဲပြားခြားနားသောစွန့်ကြဲနှင့်အတူမျိုးစုံ profile များကိုများ၏ဖန်တီးမှု,
•နည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက် overclocking: လွတ်လပ်စွာအလိုအလျောက်။
စောင့်ကြည့် parameters တွေကိုနှင့်၎င်းတို့၏ညှိနှိုင်းမှု
ဒါကဖြစ်နိုင်ခြေပြီးသားခေတ္တရှေ့အပိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်၏အရှိန်အဘို့အလွန်အရေးကြီးသော parameter သည် Processor ကိုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့အပေါ်မှာအကူးအပြောင်းလိုလျှင် System ကိုပြန်ကြားရေး> ပုံကြမ်း နှင့်တပ်မက်လိုချင်သောအစိတျအပိုငျးကို select, ဤကိန်းဂဏန်းများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
- အခြေအနေစောင့်ကြည့် ဒါဟာအကြိမ်ရေ, ဝန်၏ဗို့အားအဆင့်နှင့်အပူချိန်အချက်ပြသည်။
- Perfomance ထိန်းချုပ်ရေး> အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော ဒါဟာ slider ကို၎င်း PCI Express ကြိမ်နှုန်းကိုထိန်းညှိဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
- preference Settings> ဒါဟာအဆင့်မြင့် Mode ကိုဖို့အကြိမ်ရေ switching ဒဏ်ငွေ-စာမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးပါသည်။ ဤသည်ကိုအစားထိုး Perfomance ထိန်းချုပ်ရေး> အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော အပေါ် Perfomance ထိန်းချုပ်ရေး> နာရီ / ဗို့အားအသီးသီးအသစ်အ parameters တွေကို, အတူ။
- Perfomance ထိန်းချုပ်ရေး> မှတ်ဉာဏ် ဒါဟာမှတ်ဉာဏ်နှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြပေးခြင်းနှင့်သင်နှောင့်နှေးတင်ထားရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
- Perfomance ထိန်းချုပ်ရေး> တည်ငြိမ်ရေးစမ်းသပ်ခြင်း ဒါဟာသင်ဖျက်သိမ်းနှင့်တည်ငြိမ်ရေးစစ်ဆေးမှုများမီနှင့်အပြီးစွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
- Perfomance ထိန်းချုပ်ရေး> အော်တိုနာရီ ဒါဟာသင်အလိုအလြောကျ Processor ကိုမြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းမှခွင့်ပြုပါတယ်။
AMD ၏ Overdrive ၏အကျိုးကျေးဇူးများ:
1. ဒါဟာမြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းအဘို့အဘက်စုံသုံး utility ကိုမူကား,
2. စွမ်းဆောင်မှုကို PC components တွေကိုစောင့်ကြည့်ဘို့ program တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်;
3. တာဝန်ခံအခမဲ့ Distributed နှင့်ထုတ်လုပ်သူများထံမှတရားဝင် utility ကိုမူကား,
PC ကွန်ပျူတာစွမ်းဆောင်ရည်4undemanding;
6. စိတ်ကြိုက် interface ကို။
အားနည်းချက်များ AMD ၏ Overdrive:
2. အဆိုပါအစီအစဉ်ကို Third-party ထုတ်ကုန်ကိုထောကျပံ့မပေးပါဘူး။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: AMD ၏ Processor ကို overclocking အခြား utilities
AMD ၏ Overdrive ဘဏ်ဍာကို PC performance ကိုရယူခွင့်ပြုတဲ့အင်အားကြီးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အကူအညီဖြင့်, သင်နောက်ထပ်အစီအစဉ်များကိုမသုံးဘဲ, ဒဏ်ငွေ-tuning လုပ်ပေးအရေးကြီးသောမက်ထရစ်နဲ့လုပ်နေတာစွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အရှိန်များအတွက်အချိန်ကုန်သက်သာချင်သောသူတို့အဘို့အလိုအလျောက်မြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းလည်းမရှိ။ Russification လည်းစိတ်ဆိုးမဟုတ်မြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းမရှိခြင်း, အင်တာဖေ့အလိုလိုသိသည် ဖြစ်. , စည်းကမ်းချက်များအပျော်တမ်းပင်မှအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သင့်ကတည်းက။
AMD ၏ Overdrive အခမဲ့ Download
AMD ၏ Overdrive မှတဆင့် AMD ၏ CPU ကိုမြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်း CPUFSB ClockGen AMD ၏ Processor ကို overclocking များအတွက်အစီအစဉ်များ
AMD ၏ Overdrive - ပြုပြင်စက်၏အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန် AMD ၏ chipset ကို tweaking များအတွက် program တစ်ခု။
ရေးသားသူ: ဂျော့ခ်ျ Woltman
Size ကို: 30 MB အထိ